“हामी गोर्खाली हौ, बक्सिङमा राम्रो गर्न सक्छौं” – Khel Dainik
“हामी गोर्खाली हौ, बक्सिङमा राम्रो गर्न सक्छौं”
काठमाडौं (खेलदैनिक) । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य–सचिव रमेशकुमार सिलवालले नेपाली बक्सिङ खस्किनुको कारण खोज्ने बेला भएको बताएका छन् ।
नेपाल बक्सिङ संघले आइतबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य सचिव सिलवालले भने – “कुनै बेला दक्षिण एसियामा पावर हाउसको रुपमा रहेको नेपाली बक्सिङ खस्किनुको कारणा खेज्ने बेला आएको छ । नेपाली बक्सिङ कुनै बेला दक्षिण एशियाको शक्ति केन्द्र बनेको थियो किन खस्कियो ? दोषी को राखेप, संघ, खेलाडी, कारण खोजिनु पर्छ ।”
नेपाल भन्दा सानो मुलुक क्युवाले बक्सिङ खेलमा तहल्का मचाएकोे उदाहरण दिँदै सदस्य सचिव सिलवालले अगाडी भने – “हामी गोर्खाली हौ बक्सिङमा राम्रो गर्न सक्छौं । सानो देश क्युवाले ओलम्पिकमा मेडल ल्याउन सक्छ, नेपालले किन सक्दैन ? पदक जित्ने बानी भए पछि गोर्खाली हौ ह्याकुुलाले मिचेर पनि ल्याईन्छ । नतिजामुखी भएर लाग्नुस् राखेपको सहयोग सदैब रहन्छ ।”
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राखेप उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले बक्सिङ संघमा समस्य भएकोे स्मरण गराउदै भने – “बक्सिङ संघमा केहि समस्याहरु छन् । राखेप खेलकुद विवादरहित बनाउन लागिपरेको छ । गौरबपुर्ण इतिहास बोकेको बक्सिङ एक भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । पछिल्लो समय बक्सिङ राम्रो हुँदै गएको छ, अब यतिले पुग्दैन । बक्सिङको लागि के सहयोग गर्नु पर्छ राखेप सधै तयार छ ।”
नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राम अवालेले नेपालमा आयोजना हुने दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक जित्ने दाबी गदै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई बिशेष प्रशिक्षणका लागि थाइल्याण्ड पठाएको समेत जानकारी गराए ।
अवाले भन्छन् “सागमा हामीले पदक नजितेको धेरै समय भएको छ । हामीले नजर अहिले सागमा लगाएका छौँ । १३ औं सागमा पदक ल्याउने लक्ष्य छ । त्यसको लागि हामीले टिम थाइल्याण्ड पठाएको छौँ ।”
संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले सागका लागि नेपालले राम्रो तयारी गरिरहेको बताउँदै सागमा कम्तिमा ३ स्वर्ण जित्ने बताए ।
संघले नव नियुक्त सदस्य सचिव सिलवाललाई सम्मान पत्रसहित स्वागत गरेको थियो । कार्यक्रममा बक्सिङ खेलका ओलम्पियन,बक्सिङ खेलाडी,पदाधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
← टेनिस कोर्ट हस्तान्तरण, सदस्य–सचिव भन्छन् “समारोह राखेर हस्तान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने छैन” साउदीमा नेपाली समुदायहरुबीच खुला फुटबल प्रतियोगिता हुने →
शानदार जितका साथ एपिएफ स्कुल सेमिफाइनलमा श्रावण ५, २०७६
चौथो स्थानीय तह मकवानपुर गोल्डकप तेस्रो सातादेखि श्रावण ५, २०७६
केसीलाई राष्ट्रिय यु–२० फुटबल टोलीको जिम्मेवारी श्रावण ५, २०७६
उपाधिमाथि रोयलको ह्याट्रिक श्रावण ५, २०७६
वाल्मिकी र नेपाल राष्ट्रिय मावि सेमिफाइनलमा श्रावण ५, २०७६
नेपालले ओमान र टिमोर लेस्टेसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने श्रावण ५, २०७६